60 Ilbiriqsi! Dib loo habeeyey – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
60 Ilbiriqsi! Dib loo habeeyey – Khiyaamo&Hack
Waxaa qoray maamulka | Nofeembar 22, 2021
Doolres, Ted, Mary Jane iyo Timmy waxay ku soo laabanayaan si ay ula kulmaan apocalypse nukliyeerkan cusub, daabacaadda dib loo habeeyey ee tacaburkii atomiga ee caadiga ahaa – 60 Ilbiriqsi! Dib loo habeeyey, Muujinaya taageerada farshaxanka xallinta sare, Sawirro 2D ah oo la cusboonaysiiyay iyo qaab-dhismeedka 3D ee gacanta lagu sawiray, menu cusub interactive, nidaamka UI oo la hagaajiyay, dib u cusbooneysiin farsamo, iyo dabcan… wax cusub!
HAB CIYAAR CUSUB
Caqabadaha badbaadada – gaar ah, Sheekooyin gaagaaban oo tijaabin doona xirfadahaaga badbaadada!
si looga baxsado dhulka cidlada ah qaab sheeko sheeko ah oo dhex marta meelo badan oo ciyaaraha ah! Ma ka baxsan kartaa cidlada qaab ahaan?
NIDAAMKA XIRIIRKA CUSUB
sheekooyin badan iyo is dhexgal waalan oo ka dhexeeya xubnaha qoyska McDoodle!
COD CUSUB, WAXYAABAHA FANKA IYO MUUQAALKA MUUQAALKA AH
kuu ogolaanaya inaad ku darto midab yar hoygaaga dhiciska ah!
Kaliya leh 60 ilbiriqsiyo ayaa ka haray saameyn, U gudub guriga dhexdiisa si aad u raadiso xubnaha qoyska iyo sahay waxtar leh. Wax walba waa kaa gees: waqti, alaabta gurigaaga gaarka ah, guri ka duwan mar kasta oo aad ciyaareyso, iyo su'aasha aasaasiga ah… maxaa ku qaadaya iyo cidda aad ka tagayso?
Gaadhida hoyga dhiciska wakhtiga, nool, waa bilow uun. Wax kasta oo aad khaarajisay iyo qof kasta oo aad badbaadisay ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona badbaadadaada. Sheeko kasta oo badbaado ahi way ka duwanaan doontaa, iyadoo maalin walba ay kugu yaabayso dhacdooyin lama filaan ah. Sheekooyinkaas oo dhan miyay ku dhammaan doonaan si wanaagsan? Adiga ayay ku xiran tahay. Raashinka cuntada iyo biyaha, si fiican uga faa'iidayso agabkaaga, waajahaan doorashooyin adag oo xataa ku dhiiradaan cidlada.
Luuqadaha: Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Deutsch, Isbaanish ka Isbaanish, Shiinees la fududeeyay, Jabbaan, Kuuriyaan, Polish, Português (Brazil), Ruush, Turki
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Dib loo habeeyey, Ilbiriqsi
← Super Hero Driving School – Khiyaamo&Hack Idle Family Sim – Khiyaamada Maamulaha Nolosha&Hack →